“Ruby on Rails” သငျတနျးဖှငျ့လှဈမညျ
Submitted by zwintun on Fri, 09/18/2015 - 09:45
ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီး ကှနျပြူတာပညာရှငျအသငျးမှကွီးမှူး၍ မွနျမာနိုငျငံတှငျ Ruby on Rails နညျးပညာမြား ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျလာစရေနျ ရညျရှယျပွီး Cloud Source Japan, Inc. ၏ CEO KAZUHIRO MIYAJIMA နှငျ့ Project Engineer တဈဦးဖွဈသော ဦးစိုငျးရဲခေါငျ မှ “Ruby On Rails” သငျတနျးဖှငျ့လှဈမညျ ဖွဈပါသညျ။ အဆိုပါ သငျတနျးသို့ Web Development Knowledge ရှိသူမြား၊ Programming Knowledge အနညျးငယျ ရှိသူမြား၊ Ruby on Rails ကို လလေ့ာလိုသူမြား တကျရောကျနိုငျပါသညျ။ အဆိုပါသငျတနျးတှငျ အောကျပါအကွောငျးအရာမြားနှငျ့ ပတျသကျ၍ သငျကွားပို့ခပြေးသှားမညျဖွဈပါသညျ။ 1.What’s Ruby on Rails? (60mins) . Rails new and rails console . User Model 4. Micropost Design (15mins) . Screen Design . Model Design 2.Gem, Login, Scaffolding (60mins) . Gem, bundle, Devise install . Login page, My profile page 5. How to make micropost? . Post (40mins), Image Upload (40mins) . Profile (40mins), Follow (40mins) 3. Unit Test & red, green (30mins) . Rspec install . Test description= red testing . Post Method implementation . Test description = green testing သငျတနျးကာလ - ၂၀၁၅ ခုနှဈ၊ စကျတငျဘာလ (၂၇) ရကျ( တနင်ျဂနှေ) သငျတနျးအခြိနျ - နံနကျ ၉းဝ၀ မှ ညနေ ၄းဝ၀ နာရီ အထိ မှတျပုံတငျကွေး - ၈,၀၀၀ိ/ (ရှဈထောငျကပျြ) (နလေ့ညျစာ + ကျောဖီ) MCPA Member (50%) - ၄၀,၀၀ိ/ (လေးထောငျကပျြ) (နလေ့ညျစာ + ကျောဖီ) သငျတနျးသားဦးရေ - (၂၀) ဦး သငျတနျးနရော - အဆောငျ (၉)၊ မွညေီထပျ၊ Meeting Room (3), MICT Park၊ လှိုငျမွို့နယျ။ သငျတနျးတကျရောကျလိုသူမြားအနဖွေငျ့ စကျတငျဘာလ (၂၃) ရကျနညေ့နေ (၃) နာရီ နောကျဆုံးထား၍ MCPA ရုံးခနျးသို့ လာရောကျလြှောကျထားနိုငျပါသညျ။ အသေးစိတျသိရှိလိုပါက မွနျမာနိုငျငံကှနျပြူတာပညာရှငျအသငျး ရုံးခနျး၊ အဆောငျ(၉)၊ မွညေီထပျ၊ ဖုနျးနံပါတျ ၀၁-၆၅၂၂၇၆၊ ၀၉-၇၃၀၈၈၃၀၀ E-mail:office@mcpamyanmar.org (or) yrcpaoffice@gmail.com သို့ စုံစမျးမေးမွနျးနိုငျကွောငျး သတငျးရရှိသညျ။သငျတနျး Application Form အား Download | Myanmar Computer Professionals Associations http://www.mcpamyanmar.org/download?page=1 တှငျ Download ရယူနိုငျပါသညျ။ မှတျခကျြ(၁) ၊ သငျတနျးတကျရောကျမညျ့သူမြားအနဖွေငျ့ မိမိတို့ Laptops မြား ယူဆောငျလာပါရနျ။ မှတျခကျြ(၂) ၊ လြှောကျလှာတငျသူမြားထဲမှ စိစဈရှေးခယျြပွီး တကျရောကျခှငျ့ရှိသူမြားမှ သငျတနျးကွေး ပေးသှငျး၍ တကျရောကျရမညျ။ (Download Link ထညျ့ရနျ) တှငျ Download ရယူနိုငျပါသညျ။ မှတျခကျြ(၁) ၊ သငျတနျးတကျရောကျမညျ့သူမြားအနဖွေငျ့ မိမိတို့ Laptops မြား ယူဆောငျလာပါရနျ။ မှတျခကျြ(၂) ၊ လြှောကျလှာတငျသူမြားထဲမှ စိစဈရှေးခယျြပွီး တကျရောကျခှငျ့ရှိသူမြားမှ သငျတနျးကွေး ပေးသှငျး၍ တကျရောကျရမညျ။
Read more about “Ruby on Rails” သငျတနျးဖှငျ့လှဈမညျ
မွနျမာနိုငျငံ ကှနျပြူတာအသငျးခြုပျ (MCF) မှ ITPEC စာမေးပှဲမြားကငျြးပမညျ
Submitted by zwintun on Fri, 09/11/2015 - 20:53
သတငျးအခကျြအလကျနှငျ့ ဆကျသှယျရေးနညျးပညာ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးအတှကျ မွနျမာနိုငျငံ ကှနျပြူတာ အသငျးခြုပျမှ ကွီးမှူး၍ Information Technology Professionals Examination Council (ITPEC) အသိအမှတျပွု စာမေးပှဲမြားကို ကငျြးပမညျ ဖွဈသညျ။ Information Technology Passport Examination (IT Passport) စာမေးပှဲသညျ IT ဆိုငျရာ အခွခေံဗဟုသုတရှိပွီး IT နှငျ့ သကျဆိုငျသော လုပျငနျးတှငျ တာဝနျထမျးဆောငျနသေူမြားအတှကျ လညျးကောငျး၊ Fundamental Information Technology Engineer Examination (FE) စာမေးပှဲသညျ IT ဗဟုသုတ အခွခေံကြှမျးကငျြမှုရှိပွီးသူမြား၊ Programmer မြား၊ Program Design ရေးဆှဲသူမြားနှငျ့ Software Development လုပျငနျးမြားတှငျ လုပျကိုငျနသေူမြားအတှကျ လညျးကောငျး၊ Applied Information Technology Engineer Examination (AP) စာမေးပှဲသညျ IT ဗဟုသုတမြားနှငျ့ ကြှမျးကငျြမှုမြားကို လကျတှနေ့ယျပယျတှငျ အသုံးခနြိုငျစှမျး (Apply) ရှိသူမြား၊ အဆငျ့မွငျ့ IT လူ့စှမျးအား အရငျးအမွဈအဖွဈ အသကျမှေးဝမျးကြောငျး ပွုလိုသူမြားအတှကျ လညျးကောငျးအလုပျအကိုငျ အခှငျ့အလမျးအတှကျ ကြှမျးကငျြမှု အသိအမှတျပွု အောငျလကျမှတျ ရရှိစမေညျ့ စာမေးပှဲအသီးသီး ဖွဈသညျ။ စာမေးပှဲမြားသို့ ကှနျပြူတာတက်ကသိုလျကြောငျးသား၊ ကြောငျးသူမြား၊ နညျးပညာတက်ကသိုလျကြောငျးသား၊ ကြောငျး သူမြား၊ မွနျမာနိုငျငံကှနျပြူတာပညာရှငျအသငျးဝငျမြားနှငျ့ IT စိတျပါဝငျစားသညျ့ မညျသူမဆို ဝငျရောကျဖွဆေိုနိုငျသညျ။ 1) Information Technology Passport Examination (IT Passport) Exam Fee – 20000 Ks 2) Fundamental Information Technology Engineer Examination (FE) Exam Fee – 30000 Ks 3) Applied Information Technology Engineer Examination (AP) Exam Fee – 50000 Ks MCPA Member မြား ၅၀ % Discount ရရှိပါမညျ။ စာမေးပှဲနှငျ့ ပတျသကျ၍ အသေးစိတျအခကျြအလကျမြား သိရှိလိုပါက မွနျမာနိုငျငံကှနျပြူတာအသငျးခြုပျ (MCF)၊ အဆောငျ (၉)၊ မွညေီထပျ (MICT Park)၊ ဖုနျး - ၆၅၂၃၀၇၊ ၀၁−၂၃၀၅၂၃၃ နှငျ့ မွနျမာနိုငျငံကှနျပြူတာပညာရှငျအသငျး (MCPA)၊ အဆောငျ (၉)၊ မွညေီထပျ၊ (MICT Park)၊ ဖုနျး-၆၅၂၂၇၆၊ ၀၉၇၃၀၈၈၃၀၀ တို့သို့ ဆကျသှယျစုံစမျး မေးမွနျးနိုငျပါသညျ။ (၂၁-၁၀-၂၀၁၅) ရကျနေ့ နောကျဆုံးထား၍ စာရငျးပေးသှငျးရမညျ ဖွဈပါသညျ။
Read more about မွနျမာနိုငျငံ ကှနျပြူတာအသငျးခြုပျ (MCF) မှ ITPEC စာမေးပှဲမြားကငျြးပမညျ
ဆကျသှယျရေးနှငျ့ သတငျးအခကျြအလကျ နညျးပညာဝနျကွီးဌာနနှငျ့ မွနျမာနိုငျငံကှနျပြူတာအသငျးခြုပျ တို့ပူးပေါငျးကငျြးပသညျ့ နိုငျငံအဆငျ့ ASEAN-JAPAN Cyber SEA Game ပွိုငျပှဲ အတှကျ လေ.လာရမညျ Details Program Outline download ရယူနိုငျ
Submitted by zwintun on Fri, 09/11/2015 - 13:12
ဆကျသှယျရေးနှငျ့ သတငျးအခကျြအလကျ နညျးပညာဝနျကွီးဌာနနှငျ့ မွနျမာနိုငျငံကှနျပြူတာအသငျးခြုပျ တို့ပူးပေါငျးကငျြးပသညျ့ နိုငျငံအဆငျ့ ASEAN-JAPAN Cyber SEA Game ပွိုငျပှဲ လေ.လာရမညျ Programs အသေးစိတျ ကို အသငျး website http://www.mcpamyanmar.org/download/category/asean-japan-cyber-sea-game-... တှငျ download လုပျကာကွိုတငျပွငျဆငျထားနိငျကွောငျးအသိပေးအပျပါသညျ။ဲပွိုငျပှဲကငျြးပရေးကျောမတီ
Read more about ဆကျသှယျရေးနှငျ့ သတငျးအခကျြအလကျ နညျးပညာဝနျကွီးဌာနနှငျ့ မွနျမာနိုငျငံကှနျပြူတာအသငျးခြုပျ တို့ပူးပေါငျးကငျြးပသညျ့ နိုငျငံအဆငျ့ ASEAN-JAPAN Cyber SEA Game ပွိုငျပှဲ အတှကျ လေ.လာရမညျ Details Program Outline download ရယူနိုငျ
ဆကျသှယျရေးနှငျ့ သတငျးအခကျြအလကျ နညျးပညာဝနျကွီးဌာနနှငျ့ မွနျမာနိုငျငံကှနျပြူတာအသငျးခြုပျ တို့ပူးပေါငျးကငျြးပသညျ့ နိုငျငံအဆငျ့ ASEAN-JAPAN Cyber SEA Game ပွိုငျပှဲဝငျခှငျ့လြှောကျလှာမြား ရယူနိုငျ။
Submitted by zwintun on Wed, 09/09/2015 - 13:46
အာဆီယံနိုငျငံမှ လူငယျမြား Cyber Security ပိုငျးဆိုငျရာအသိအမွငျနှငျ့ ကြှမျးကငျြမှုမြား တိုးတကျစရေနျ ရညျရှယျ၍ ASEAN-JAPAN Cyber SEA Game ပွိုငျပှဲကို Indonesia နိုငျငံ၊ ဂကြာတာမွို့တှငျ ၂၀၁၅ ခုနှဈ၊ နိုဝငျဘာလ(၁၀)ရကျနအေ့ထိ ကငျြးပပွုလုပျမညျဖွဈပါသညျ။ ထိုပွိုငျပှဲတှငျ မွနျမာနိုငျငံမှ Cyber Security / Defence ကြှမျးကငျြသူ(၃)ဦး သှားရောကျယှဉျပွိုငျရမညျဖွဈပါသညျ။ ထိုပွိုငျပှဲကိုသှားရောကျယှဉျပွိုငျနိုငျမညျ့ မွနျမာနိုငျငံကိုယျစားပွုအဖှဲ့ကို ရှေးခယျြနိုငျရနျအတှကျ ဆကျသှယျရေးနှငျ့ သတငျးအခကျြအလကျနညျးပညာဝနျကွီးဌာနနှငျ့ မွနျမာနိုငျငံကှနျပြူတာအသငျးခြုပျတို့ ပူးပေါငျးပွီး နိုငျငံအဆငျ့ Cyber SEA Game ပွိုငျပှဲကို ရနျကုနျမွို့၊ MICT Park, Conference Hall တှငျ ၂၀၁၅ခုနှဈ၊ အောကျတိုဘာ(၈)ရကျနှငျ့ (၉)ရကျနမြေ့ားတှငျ ကငျြးပပွုလုပျသှားမညျဖွဈပါသညျ။ အဆိုပါပွိုငျပှဲအတှကျ ဝငျခှငျ့လြှောကျလှာ Form မြားနှငျ့ စညျးကမျးခကျြမြားကို အောကျပါ Link www.mcpamyanmar.org/download , www.mcfmyanmar.org and www.mmcert.org.mm မြားတှငျ Download ရယူနိုငျပွီး လြှောကျလှာမြားကို (၂၈.၉.၂၀၁၅) ညနေ(၄:၀၀)နာရီနောကျဆုံးထား၍ မွနျမာနိုငျငံကှနျပြူတာအသငျးခြုပျ၊ MICT Park ၊ အဆောငျ(၉)၊ မွညေီထပျ၊ ဖုနျးနံပါတျ ၀၁−၆၅၂၃၀၇၊ ၀၁−၂၃၀၅၂၂၃၃၊ အီးမေးလျ− ictcompetition@gmail.com သို့ အီးမေးလျပေးပို့၍ဖွဈစေ၊ လူကိုယျတိုငျ လာလြှောကျ၍ဖွဈစေ ပေးပို့လြှောကျထားရပါမညျ။
Read more about ဆကျသှယျရေးနှငျ့ သတငျးအခကျြအလကျ နညျးပညာဝနျကွီးဌာနနှငျ့ မွနျမာနိုငျငံကှနျပြူတာအသငျးခြုပျ တို့ပူးပေါငျးကငျြးပသညျ့ နိုငျငံအဆငျ့ ASEAN-JAPAN Cyber SEA Game ပွိုငျပှဲဝငျခှငျ့လြှောကျလှာမြား ရယူနိုငျ။
“Today Hacking Technologies (Offensive Vs Defensive Security) and Countermeasures” သင်တန်းဖွင့်လှစ်မည်
Submitted by zwintun on Tue, 09/01/2015 - 10:55
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းမှကြီးမှူး၍ Hacking နည်းပညာရပ်များကိုစိတ်ဝင်စားသော မြန်မာလူငယ်များအတွက် Today Hacking Technologies (Offensive Vs Defensive Security) and Countermeasures သင်တန်းကို၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ (၁၉) ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်သွားမည်ဖြစ်သည်။
Offensive/Defensive Security ကို နားလည်ပိုင်နိုင်သော IT Security Professional များ ပိုမိုပေါ်ထွန်း လာစေရန် ရည်ရွယ်ဖွင့်လှစ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
သတင်းအချက်အလက်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ နည်းပညာရပ်များ (Information Security) ကိုအထူးစိတ်ဝင်စားသူများ၊ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ အဆင့်မြင့် ICT Industry များတွင် Security Admin များအဖြစ် လက်တွေ့ကိုင်တွယ် ထိန်းချုပ်နိုင်လိုသူများ တက်ရောက်သင့်သော သင်တန်းဖြစ်ပါသည်။ ယနေ့ခေတ် ICT အသုံးပြုမှုများ တွင်ကျယ်လာ သည်နှင့် သတင်းအချက်အလက်လုံခြုံရေးသည် အထူးအရေးပေးဆောင်ရွက်ရန် ကိစ္စတစ်ရပ်ဖြစ်လာပြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာအဆင့်မြင့် လုပ်ငန်းခွင်များတွင် ကျွမ်းကျင်သော IT Security Officer/ Professional များ လိုအပ်ချက်မြင့်မားလာပြီး၊ ရာထူး၊ လစာ အခွင့်အလမ်းကောင်းများနှင့် ခေါ်ဆိုမှုများ များပြားလာပါသည်။ Latest Hacking နည်းပညာရပ်များ၊ Threats များ၊ Policies and Planning၊ Countermeasure စနစ်များကို Module တစ်ခုချင်းစီအလိုက် စာတွေ့၊ လက်တွေ့စနစ်တကျ သင်ကြားရမည်ဖြစ်ပါသည်။
သင်တန်းပြီးဆုံးပါက Security Admin များအဖြစ်၊ Freelance Security Professional များအဖြစ် ရပ်တည်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု EC COUNCIL (USA) မှ ချီးမြှင့်သည့် ENSA နှင့် CEH ဘာသာရပ်များ ဝင်ရောက်ဖြေနိုင်ရန် လေ့ကျင့်ပြင်ဆင်ပြီးသားဖြစ်စေပါမည်။ အဓိကဘာသာရပ်များ-
- Hacking Phases and Technologies
- System Hacking and Pen testing
- Mobile Hacking and Threats
- Hardening Systems and Security Policies
- Network Vulnerability Assessments
- IDS, Firewalls and Cryptography
- Assignments etc…
သင်တန်းကာလ - ၂၀၁၅ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ(၁၉) ရက် မှ အောက်တိုဘာ (၂၄)ရက်အထိ (စနေ၊တနင်္ဂနွေ)
သင်တန်းအချိန် - နံနက် ၀၉း၀၀ နာရီ မှ ၁၂း၀၀ နာရီအထိ
သင်တန်းကြေး - ၃၀၀,၀၀၀ိ/ (သုံးသိန်းကျပ်တိတိ)
MCPA Member (50%) - ၁၅၀,၀၀၀ (တစ်သိန်းငါးသောင်းကျပ်)
သင်တန်းသားဦးရေ - (၁၈) ဦး
သင်တန်းနေရာ - အဆောင် (၉)၊ မြေညီထပ်၊ MICT Park၊ MCPA Lab Room၊ လှိုင်မြို့နယ်။
သင်တန်းတက်ရောက်လိုသူများအနေဖြင့် ၂၀၁၅ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ(၁၈) ရက်နေ့ညနေ(၃) နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ MCPA ရုံးခန်းသို့ လာရောက်စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက မြန်မာနိုင်ငံ ကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းရုံးခန်း၊ အဆောင်(၉)၊ မြေညီထပ်၊ ဖုန်းနံပါတ် - ၆၅၂၂၇၆၊ ၀၉-၇၃၀၈၈၃၀၀သို့ စုံစမ်းမေးမြန်း နိုင်ပါသည်။
Read more about “Today Hacking Technologies (Offensive Vs Defensive Security) and Countermeasures” သင်တန်းဖွင့်လှစ်မည်
MCAP Quiz 2015 ရန်ုကုန်တိုင်းဒေသကြီး ပြိုင်ပွဲ Final ရေးဖြေအောင်စာရင်း ထုတ်ပြန်
Submitted by zwintun on Sun, 08/16/2015 - 13:56
Read more about MCAP Quiz 2015 ရန်ုကုန်တိုင်းဒေသကြီး ပြိုင်ပွဲ Final ရေးဖြေအောင်စာရင်း ထုတ်ပြန်
Submitted by zwintun on Thu, 07/23/2015 - 17:34
မန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းမှ ကြီးမှူး၍ ၂၀၁၅ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ (၈) ရက် (စနေနေ့) နေ့လယ် (၂း၀၀ မှ ၅း၀၀) နာရီအထိ ရန်ကုန်မြို့၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ MICT Park၊ Conference Hall တွင် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း ဖြေဆိုအောင်မြင်ထားပြီးသူများအတွက် “ကွန်ပျူတာပညာရေးလမ်းကြောင်းများ နှင့် နိုင်ငံတကာအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ” အကြောင်းကိုဟောပြောပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပါ သည်။
အဆိုပါ ဟောပြောပွဲသို့ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်မြင်ပြီးသူများ၊ ကျောင်းသားမိဘများနှင့် စိတ်ပါဝင်စားသူ မည်သူမဆို (အခမဲ့) တက်ရောက် ဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ် သိရှိလိုပါက မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းရုံးခန်း၊ အဆောင် (၉)၊ မြေညီထပ်၊ MICT Park၊ ဖုန်း − ၀၁-၆၅၂၂၇၆၊ ၀၉−၇၃၀၈၈၃၀၀ ၊ email – office@mcpamyanmar.org ၊ yrcpaoffice@gmail.com သို့ ဆက်သွယ် မေးမြန်း စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။
တက်ရောက်မည့်သူများအနေဖြင့် ဖုန်းဖြင့်ဖြစ်စေ၊ အီးမေးလ်ဖြင့်ဖြစ်စေ ကြိုတင်စာရင်း ပေးသွင်း နိုင်ပါသည်။
Read more about တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း ဖြေဆိုအောင်မြင်ထားပြီးသူများအတွက် “ကွန်ပျူတာပညာရေးလမ်းကြောင်းများ နှင့် နိုင်ငံတကာအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ” ဟောပြောပွဲကျင်းပမည်
“Wireless Network Essentials Course (WNE)” အမှတ်စဉ် (၁၄) သင်တန်းဖွင့်လှစ်မည်
Submitted by zwintun on Sat, 07/18/2015 - 12:38
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းမှကြီးမှူး၍ Networking နည်းပညာရပ်များကို စိတ်ဝင်စားသော မြန်မာလူငယ်များအတွက် Wireless Network Essentials Course (WNE) အမှတ်စဉ် (၁၄) သင်တန်းကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ (၈) ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်သွားမည်ဖြစ်သည်။
သင်တန်းကာလ	-	၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ သြဂုတ် (၈) ရက် မှ စက်တင်ဘာလ (၁၃) ရက်အထိ (စနေ၊တနင်္ဂနွေ)
သင်တန်းတက်ရောက်လိုသူများအနေဖြင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ (၇) ရက်နေ့ ညနေ (၃) နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ MCPA ရုံးခန်းသို့ လာရောက်စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာ ပညာရှင် အသင်းရုံးခန်း၊ အဆောင်(၉)၊ မြေညီထပ်၊ ဖုန်းနံပါတ် - ၆၅၂၂၇၆၊ ၀၉-၇၃၀၈၈၃၀၀ သို့ စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
Read more about “Wireless Network Essentials Course (WNE)” အမှတ်စဉ် (၁၄) သင်တန်းဖွင့်လှစ်မည်
MCPA Quiz2015 ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအဆင့်ပြိုင်ပွဲ ကျင်းပမည်
Submitted by zwintun on Thu, 07/16/2015 - 15:03
MCPA Quiz 2015 ပြိုင်ပွဲသည် ပြည်နယ်တိုင်း ဒေသကြီး အသီးသီးရှိ အစိုးရ/ပုဂ္ဂလိက တက္ကသိုလ်၊ ကောလိပ်နှင့် သင်တန်းကျောင်းများမှ ဘွဲ့ကြိုကျောင်းသား/သူများ၊ IT ပညာရပ်များကို စိတ်ဝင်စားမှု ပိုမိုရရှိလာပြီး အရည်အသွေးပြည့်ဝလာစေရန်၊ IT ဆိုင်ရာ ပညာဗဟုသုတများ တိုးပွားလာစေရန်၊ အဖွဲ့လိုက် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းဖြင့် Team Work လုပ်ကိုင်တတ်စေရန်၊ နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြု IT စာမေးပွဲများ ဖြေဆိုရာတွင် အဆင်သင့်ဖြစ်စေရန် ရည်ရွယ်၍ တိုင်းအဆင့် ရေးဖြေပြိုင်ပွဲကို (၁၅-၈-၂၀၁၅) နေ့နှင့် တိုင်းအဆင့် Final ပြိုင်ပွဲကို (၂၂-၈-၂၀၁၅) နေ့များတွင် လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံအဆင့်ပြိုင်ပွဲကို (၃-၁၀-၂၀၁၅) နေ့များတွင် MICT Park, Hlaing Campus ၌ ကျင်းပမည်ဖြစ်ပါသည်။
ပြိုင်ပွဲဝင်လျှောက်လွှာများကို www.mcpamyanmar.org/download တွင်လည်း ရယူနိုင်ပါသည်။
ဆက်သွယ်ရန်- ရန်ုကုန်တိုင်းဒေသကြီးကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းရုံးခန်း၊ အဆောင် (၉)၊ မြေညီထပ်၊ MICT Park ၊ လှိုင်တက္ကသိုလ်နယ်မြေ။ ဖုန်း- ၀၁ ၆၅၂၂၇၆၊ ၀၉၇၃၀၈၈၃၀၀ သို့ လည်းကောင်း၊
Email- examcoordinator@mcpamyanmar.org သို့လည်းကောင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပြီး၊
Website- http://www.itpec.org/pastexamqa/fe.html တွင်လည်း မေးခွန်းဟောင်းများ ကြည့်ရှု နိုင်ပါသည်။
Read more about MCPA Quiz2015 ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအဆင့်ပြိုင်ပွဲ ကျင်းပမည်
MCPA Certified Network Associate Exam Result List (June 2015 အောင်စာရင်း ) ထုတ်ပြန်
Submitted by zwintun on Wed, 07/15/2015 - 16:24
Read more about MCPA Certified Network Associate Exam Result List (June 2015 အောင်စာရင်း ) ထုတ်ပြန်